Kwemakore anopfuura makumi matatu, "mhando pamusoro pezvose" yakagara ichidzidziswa mundangariro dzevashandi.
YTS ine vashandi vanopfuura mazana matatu, kusanganisira vagadziri vehunyanzvi, mainjiniya. Isu tinokwanisa kugadzira zvikamu zvitsva uye zvigadzirwa kupa vatengi nezvakanakisa zvigadzirwa.
Ipa Unhu hweSevhisi
YTS yakashongedzera anopfuura zana seti eemi-otomatiki uye otomatiki bhurasho kugadzira uye kuyedza michina, iyo inogona kuvandudza kugona kweYTS kugona zvakanyanya.
YTS ine vashandi vanopfuura zana nemakumi mashanu ekugadzira musangano uye isu tese takaona semi-otomatiki uye zvizere otomatiki yekugadzira mitsara yekuita. Dhizaini yezvivakwa zvebasa zvakagadziriswa uye zvine musoro.
Muna 2005, kuiswa kwetekinoroji nemichina zvakabvumira YTS kuwedzera bhizinesi rayo kupenda bhurashi nzvimbo. Mugore rimwe chetero, YTS yakagadzira dzimbahwe rayo-mugadziri muQingyuan Industrial Park, nzvimbo yepasi peBaoding, Hebei. Inotora pamusoro pe 700,000 makumbo mana, akaumbwa neyakavira bristle kugadzira chirimwa, filament yekudhirowa chirimwa, kubata kugadzira department, brashi kugadzira ...
YTS chakaita zvokugadzirwa Filament 002
YTS chakaita zvokugadzirwa Filament 003
YTS chakaita zvokugadzirwa Filament 004
YTS chakaita zvokugadzirwa Filament 005